Video2Webcam 3.3.1.6 Keygen Patch...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ Video2Webcam 3.3.1.6 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! Update လေးထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ...!Install မလုပ်ခင် Internet Connection လေးကိုဖြုတ်ထားပေးပါ...!ကျွန်တော် Keygen လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်...! Install Note ကိုသေချာဖတ်ပြီးမှ Install လုပ်ပေးပါ...! Support လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဖိုင်တွေကတော့ AVI, ASF, FLV, MP4, MPEG, MPG, RAM, RM, RMVB, WMV, JPG, GIF, BMP, PNG, etc. Picture Formats အနေနဲ့လည်း (jpg, gif, bmp, png ) ကို Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်...!!နောက်ပြီးတော့ · MSN, Camfrog, Skype, ICQ, AIM, Paltalk, Yahoo Messenger, Vzo တွေမှာလည်း အသုံးပြုလို့ရပါတယ်...!ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 5.85 MB ရှိပါတယ်...! အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
"ဒီမှာယူသွားပါ..." (5.85 MB)
1 Response to Video2Webcam 3.3.1.6 Keygen Patch...!
အမနေမကောင်းနေလို့ဘာမုန့်မှလဲမကျွေးရဘူး c-box မတွေ့လို့